राजनीतिक खेलाडीलाइ हराउने युवा नेता धन राज गुरुङ - Naya Aawaj
१ पौष, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको उपसभापतिको मतगणना सम्पन्न भएको छ । जस अनुसार सभापतिमा विजयी शेर बहादुर देउवा समुहका पूर्ण बहादुर खड्का र सभापतिमा पराजित डा. शेखर कोइराला समुहका धन राज गुरुङ विजयी भएका छन् । खड्काको मतअन्तर २०० हाराहारीमा भए पनि गुरुङले भने २/३ मत अन्तरले जितेका हुन् ।
सभापतिमा पराजित डा. शेखर कोइराला समुहका चन्द्र भण्डारी, देउवा समुहका विजय गच्छादार, प्रकाशमान सिंह समुहकी सुजाता कोइराला र विमलेन्द्र निधी समुहकी दिव्यश्वरी शाह पनि पराजित भएका छन् । देउवा पक्षबाट प्रतिस्पर्धामा रहेका विजय गच्छदार र शेखर पक्षका चन्द्र चण्डारी प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा पराजित भए। सभापतिमा दुई पदका लागि सात जनाको उम्मेद्वारी परेको थियो।
धनराज गुरुङ नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत संविधानसभामा सभासद भईसकेका हुन् । २०३६ सालबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका ४२ वर्षीय गुरुङ २०५३मा नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रीय सभापति, २०५४ सालमा तरुण दलका महासचिव र त्यसपछि काङ्ग्रेस स्याङजा जिल्ला कार्यसमिति सदस्य रहिसक्नुभएको छ।
राजनैतिक संघर्षका क्रममा विभिन्न समयमा पक्राउ र हिरासत भोग्दै आएका गुरुङ युवाहरूलाई प्रजातान्त्रिक उद्देश्यका लागि गोलवद्ध गर्ने कुरामा विशेष रुचि राख्‍नुहुन्छ। धनराज गुरुङ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानूनमा स्नातक र समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर हुनुहुन्छ। पत्रपत्रिकामा उहाँका लेख-रचना प्रकाशित हुदै आएका छन्।
एक छोराका पिता गुरुङको रुचि समाजसेवामा पनि छ। सैद्धान्तिक स्पष्टता, लगनशीलता र जुझारूपनले आफूलाई संविधानसभामा पुर्‍याएको उहाँ बताउनुहुन्छ। संविधानसभामा गुरुङले प्रमुखतासाथ उठाउने अठोट गरेका मुद्दा हु‍न्- क. राज्यका सबै अङ्गमा आदिवासी जनजातिको समान सहभागिता गराउने, ख. सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नै थियो । उनले यो अठोट पुरा गरिसकेका छन् । कांग्रेसका प्रभावशाली युवा नेताका रुपमा चिनिएका गुरुङ जनताका प्रिय नेता हुन् ।
नेपालको धुमिल राजनीतिमा स्वच्छ छवी बनाएका गुरुङले मङ्सिर १० र २१ गते दुइ चरणमा सम्पन्न प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्यमा भने टिकट पाएनन । कांग्रेस भित्रको गुट र नातावादका कारण उनले टिकट नपाएको जानकारहरु बताऊँछन् । उनले टिकट नपाउनुले कांग्रेस भित्र स्वच्छ छवी भएका नेताको स्थिति कस्तो छ भन्ने कुरा स्पस्ट भएको छ
२०४८ ताकादेखि कांग्रेसमा केजिवि ग्रुप निकै सक्रिय थियो र विजय कुमार गच्छदार यहि ग्रुपभित्रका एक हस्ती हुन् । केजिवीभित्र खुमबहादु खड्का, गोविन्दराज जोशी र विजय गच्छदार थिए । यसअघि दुबैलाई अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाइसकेको थियो । सदाबहार मन्त्री बन्ने जोशी अख्तियारले डामेपछि राजनीतिबाट विस्थापित भएका छन भने खुमबहादुरको जेल जीवनपछि निधन भइसकेको छ । जोशी र खड्का जस्तै राजनीतिमा दवदबा कायम गर्दै आएका गच्छदारमाथि अहिले सोचे जस्तो भएन । १६ वर्षको उमेरदेखि राजनीतिमा होमिएका गच्छदार २०१० साल माघ १९ मा सुनसरी ८ पचरामा जन्मिएका हुन् । आफ्नो राजनीतिक जीवनमा कहिल्यै घाटा नबेहोरेका गच्छदार २०४८ साल यता लगातार प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् ।
गच्छदारमाथि सरकारी जग्गा हिनामिनाको अभियोग छ । काङ्ग्रेसका उपसभापति समेत रहेका गच्छदारको सांसद पद पनि निलम्बन भएको छ । विसं २०४८ मा पहिलो पटक सिंहदरबार छिरेका गच्छदार तत्कालीन गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको पालामा सञ्चार राज्य मन्त्री भएका थिए । २८ वर्षको समयअवधिमा सत्ताको स्वाद लिएका गच्छदार २०७४ मा अन्तिम पटक उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री भएका थिए ।
पहिलो पटक २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा आफू अनुकुलको व्यक्तिलाई तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाले टिकट दिन नमानेपछि गच्छदारले कांग्रेस छोडेका थिए । कांग्रेसभित्र आफ्नो सुनुवाइ नभएको झोंकमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालमा प्रवेश गरेका थिए । मधेसी जनअधिकार फोरममा रहँदा माधव नेपालको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने विवाद भएपछि मधेसी जनअधिकार फोरम — लोकतान्त्रिक गठन गरेका थिए ।
उपेन्द्रसंगको राजनीतिक हिसाबकिताब पनि नमिलेपछि आफ्नै नेतृत्वमा फोरम लोकतान्त्रिक गठन गरेर उनी पुनः सत्तामा पुगेका थिए । सत्ताको लाभ र हानिमा हिसाबकिताब मिलाउन माहिर खेलाडी विजयले २०७४को संघीय निर्वाचनपछि फोरम लोकतान्त्रिकलाई कांग्रेसमा विलय गराएका थिए । कांग्रेसमा पार्टी विलय गराएपछि उनी कांग्रेस उपसभापति बनेका हुन् ।
राजनीतिमा सधै चतुर खेलाडीको बिल्ला लागेका गच्छदारले २०४८ यताको संसदीय निर्वाचनमा कहिल्यै पराजय भोग्नु परेन । हरेक निर्वाचनमा उम्मेदरवार हुने गच्छदार संधै प्रत्यक्ष निर्वाचनमा विजय हुँदै आए । २०७४ को संघीय निर्वाचनमा उनी आफ्नै गृह जिल्ला सुनसरीबाट विजयी भएका थिए । तत्कालीन एमालेकी उम्मेदवार भगवति चौधरीसंगको सकसपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट उनी संसदमा पुगेका थिए । विजय र भगवतीको क’डा प्रतिस्पर्धामा मतगणना समेत प्रभावित भएको थियो । गच्छदारका प्रतिस्पर्धी भगवति चौधरीले धांधली गरेर आफूलाई हराएको आरोप लगाउनु भएको थियो ।